Waa maxay html6? | Hal-abuurka khadka tooska ah
HTML waxa uu soo muuqday 90-meeyadii, waxa uu kobcay ilaa laga gaadhay nooca HTML5, kaas oo ah waxa aynu maanta naqaano. Sida boggaga internetka, luqaddooda ayaa horumarisa, sidaas darteed waxaa loo baahan yahay in la cusbooneysiiyo horumarinta webka si ay u noqoto mid waxtar badan oo dareere ah. Tani waa waxa aad rabto inaad ku gaadho nooca ugu dambeeyay ee HTML5, oo loo yaqaan HTML6. In kasta oo taariikhda lagu sii daayo suuqa aan weli la garanayn, qaar ka mid ah isbeddelada suurtogalka ah ayaa la og yahay oo la ogaaday.
Qoraalka maanta waxaan kuu sheegaynaa waa maxay HTML6, sifooyinka ay soo bandhigi doonto, shuruudaha lagama maarmaanka u ah in la isticmaalo iyo isbeddelada la og yahay ilaa hadda, inkastoo laga yaabo in ay isbeddelaan ilaa inta ay soo baxayso.
1 Waa maxay HTML6?
1.1 HTML6 sifooyinka
1.2 HTML6 shuruudaha
HTML (HyperTextMarkup Language) ama sidoo kale loo yaqaan luqadda calaamadaynta hypertext, Waxa loola jeedaa luqadda calaamadaynta ee sharraxaadda bogagga shabakadda. Waxa luqaddani ay tahay qeexidda qaab-dhismeedka aasaasiga ah iyo koodka (HTML), si loo qeexo waxa ku jira bogga shabakadda sida qoraallada, sawirrada, iyo kuwa kale. Dhammaan daalacayaashu waxay u isticmaalaan qaabkan luqad ahaan si ay u muujiyaan boggaga internetka.
Luuqadda HTML waxay ku salaysan tahay kala duwanaansho. Si aad u fahamto, haddii aad rabto inaad ku darto curiye dibadda ah bogga shabakadda, waxaa lagama maarmaan ah in la tixraaco meesha uu ku yaal shay qoraal ah. Sidaa darteed, qaab-dhismeedka bogga shabakadda wuxuu yeelan doonaa oo kaliya qoraal. Maaddaama ay tahay halbeeg, waxa HTML raadinayo waa in iyadoon loo eegin browserka, bog kasta oo shabakad ah waxaa tarjumi karaa browser kasta.
Sannadkii 2014, HTML5, oo hadda ka mid ah tignoolajiyada shabakadda ee ugu caansan, ayaa suuqa soo galay. Laakin wixii markaas ka dambeeyay ma jirin wax cusub oo yimid ilaa la ogaaday in HTML6 dhawaan lagu sii dayn doono suuqa. Sidaa darteed, HTML6 waxa ay noqon doontaa nooca la cusboonaysiiyay ee HTML5. Gaar ahaan, waxay yeelan doontaa sifooyin horumarsan oo ku salaysan amniga ama muujinta calaamadaha, iyo kuwo kale.
Wada-noolaansho: waxay la jaanqaadi kartaa noocyadii hore. Tan waxa u sabab ah OOXML (Office Open XML) kaas oo qaban doona qaybta taxanaha ah.
Naqshadeynta: Noocan cusubi wuxuu taageeri karaa HTML CSS4, kaas oo ka dhigi doona naqshadeynta garaafyada bogga shabakada mid aad u soo jiidasho leh.
Socdaal fudud: horumariyayaashu waxay awood u yeelan doonaan inay dukumeentigoodii hore ka soo dejiyaan HTML4 ilaa HTML6 iyo lidkeeda.
Caasima HTML6 waa joogto marka la eego heerka syntax waxaa lagu qeexi karaa ilaa 10 sadar.
Nuqulkii ugu dambeeyay ee HTML5 waxay u baahan tahay browser-ka in loo cusboonaysiiyo noocii u dambeeyay. Hagaag, noocani wuxuu mudnaanta siinayaa amniga. Dib u cusboonaysiinta barowsarkaaga waxay ka caawin doontaa luqaddan in ay sii haysato dhammaan sifooyinkiisa kaabaya. Iyada oo aan loo eegin browser-ka aad isticmaasho, ha ahaato Firefox, Chrome, Opera, Safari ama mid kasta oo aad taqaano, waa inaad la socotaa si aad u hesho waxqabadka ugu fiican HTML6.
Kuwani waa qaar ka mid ah sifooyinka uu yeelan doono HTML6, maadaama aan weli la sii dayn, waxaa laga yaabaa inay isbeddelaan ilaa inta ka dib la sii daayo.
Is dhexgalka kamaradaha: HTML6 waxa ay leedahay sawir ama muuqaal qaadis, taas oo u sahlaysa isticmaalayaasha in ay galaan sawiro iyo kaydinta kombayutarka si loo xakameeyo kamarada iyo heerka ogaanshaha wanaagsan.
Shahaadada: Browser-yadu waa in ay isla markiiba bixiyaan caddayn xooggan marka la gelayo noocyada cusub ee HTML. Kaliya adoo hubinaya kalsoonida software-ka waxaad si dhab ah u wanaajin kartaa shaqeynta shabakada iyo browserka.
Maktabadda: Inta badan mareegaha ayaa isticmaala maktabadaha JS ee kaydsan, si loo dedejiyo habka horumarinta codsiga shabakadda.
Amarrada: Mid ka mid ah isbeddellada la filayo waa marka la eego qaybinta qaab dhismeedka muuqaalka bogga shabakadda.
Fasiraadaha: Sidaan horay u soo sheegnay, qaab-dhismeedka HTML wuxuu u baahan yahay sharraxaad gaar ah oo ku saabsan erayada, jumladaha iyo cutubyada.
microformats: calaamadaha caadiga ah waa la hagaajin doonaa, maadaama kuwani ay tayada boggaga internetka ka dhigayaan mid wanaagsan. Soosaarayaasha shabakadu waxay qeexi karaan taariikhaha, meelaha leh HTML6.
Waafaqsanaanta Sawirka: Inta u dhaxaysa terminaalka kala duwan, cabbirka pixels ayaa isbeddeli doona. Cusboonaysiintan la hagaajiyay waxay awood u yeelan doontaa inay muujiso cabbirrada sawirka oo ay hagaajiso arrinta sawirka.
HTML6 weli ma ahan cusbooneysiin dhab ah HTML5, sidaas darteed Isbeddelladan iyo shuruudahan ma ahan kuwo kama dambeys ah, in kasta oo haddii qaar ka mid ah cusbooneysiinta la soo bandhigay, isbeddellada intiisa kale waa saadaasha ku saabsan waxa uu noqon karo nooca cusub ee HTML5.
Dhanka kale, waxaan kaaga tagayaa xiriirka qoraal kale oo ku saabsan Hababka HTML5 iyo CSS3 si aad u sii tababarto ilaa nooca ugu dambeeya uu soo baxo. Waxaan rajeynayaa in qoraalkani uu yahay mid waxtar kuu leh oo aad awood u yeelatay inaad si fiican u fahanto waxa HTML6 yahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Waa maxay html6?